Varairidzi Vanonzi Vatanga Basa Asi Vasingashandi Nemwoyo Wose
Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti varairidzi, avo vatanga basa neChipiri, vachange vasingashande nemwoyo wose, sezvo vari kutsutsumwa nemari yavakawedzerwa nayo nehurumende.
Sangano iri rinoti varairidzi vose, zvisineyi nekuti vari pasi pesangano ripi, vachange vachingoenda kubasa asi vasinga dzidzisi vana vechikoro.
Hurumende yakawedzera varairidzi mari dzemihoro nezvikamu zvinosvika chiuru kubva muzana, (1000 %), izvo zvakasiya murairidzi anotambira mari iri pasi pasi, ava kutambira mari inoita $260 million pamwedzi, inove iri kurambwa nevarairidzi vachiti vanoda kupihwa $526 million pamwedzi.
Mutungamiri weZIMTA, Amai Tendai Chikowore, vaudza Studio 7 kuti havana chekutaura pamusoro penyaya iyi, vakati tivabate neChitatu.
Asi mutungamiri wePTUZ, VaTakavafira Zhou, vaudza Jonga Kndemiiri weStudio 7 kuti zvinhu zvichakwidza makata kana varairidzi vakawana hurumende isina kuvawedzera mari dzavo pavanotambira musi wa22 mwedzi uno.